Ingabe ngisebudlelwaneni obungaphephile?
Igama lami nginguGugu * ngisanda kugubha usuku lokuzalwa ​​lwami ngihlanganisa iminyaka engamashumi ayisithupha nabangane esikoleni. Isoka lami elineminyaka engu-25 ubudala liyangithanda kakhulu kangangokuthi lingithengela izipho futhi liyangiyisa ezindaweni zokudlela ezibizayo. Kodwa wathukuthela kakhulu ngemuva kwephathi yami ngoba ngangihleli namantombazane nabafana basesikoleni. Uthi 'ngishibhile' futhi wangishaya kanzima kangangokuba umlomo wami wopha. Wadabuka ngemuva kwalokho wathi akazi ukuthi ubengenwe yini futhi wesaba ukuthi uzolahlekelwa yimi. Waxolisa, wangithengela i-airtime kanye ne-jean entsha.
Uma 'uthando' lubuhlungu akusilo uthandololo, akhathaliseki ukuthi siyini isizathu esiyimbangela yobuhlungu. Ukukuvimbela ukuba ungachithi isikhathi nabangani, ucelwa ukuba 'ubonise uthando lwakho ngokuya ocansini' nokukhonjiswa ukuthi ukukulinyazwa ngandlela-thile iphutha lakho, izibonakaliso ezicacile ukuthi usebudlelwaneni obubi. Khumbula ukuthi ukubangela ubuhlungu emzimbeni bomunye umuntu ukumlimaza kodwa ukubizwa ngamagama, ukuthukwa, ukunganakwa umuntu othandana naye nokungafuni ukusebenzisa ikhondomu nakho futhi kuyalimaza !
Uthando lungaboniswa ngezindlela eziningi ezingadingi ucansi noma imali. Ukubambana, ukuqabulana nokuba ndawonye, ukubambana izandla, ukukhuluma ngekusasa kuyizindlela ezimbalwa...
Ubudlwelwane obuphilile bugcwele uthando, umusa nokuhlonipha. Hlonipha othandana naye kanye nawe futhi; ngakho-ke ungamukeli ukulimazwa noma ukuphoqwa ukwenza noma yini ongazimisele ukuyenza.
Ngakho ucabangani? Ingabe uGugu * usebudlelwaneni obungaphilile?